Coin Locker Girl ( 2015 ) - Myanmar Asian TV
Coil Locker Girl 2015
ဒီတဈခေါကျကတော့ 2015 ခုနှဈထှကျကားကောငျးလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
အီယောငျးလို့ချေါတဲ့ စှနျ့ပဈခံကလေးတဈယောကျကို ငှတေိုးခြေးစားတဲ့မိနျးမတဈယောကျကမှေးစားလိုကျတယျ။
ငှခြေေးတယျဆိုပမေယျ့ ပွနျမဆပျနိုငျရငျ လူသတျ၊ ကလီစာထုတျရောငျးတဲ့ အလုပျတှပေါလုပျတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ပကျဆူဟှနျးဆိုတဲ့ ကွငျနာတတျတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ဆုံတှခေဲ့တယျ။
ဆူဟှနျးအဖဖွေဈသူ ထှကျပွေးတော့ အီယောငျးအမကေ ဆူဟှနျးကိုသတျဖို့လုပျတယျ….
ဒီလိုနဲ့ အီယောငျးတဈယောကျ သူ့ကိုကွငျနာတဲ့ကောငျလေးကို ကယျတငျနိုငျမှာလား……
ဒါမှမဟုတျ မှေးစားအမအေတှကျ ဆူဟှနျးကိုသတျမှာလား….
အီယောငျးနရောမှာတော့ Kim Go Eun ကပီပီပွငျပွငျသရုပျဆေုငျထားပါတယျ
သနားကွငျနာတတျတဲ့ကောငျလေးကတော့ uri Bogum oppa ဖွဈပါတယျ။
ဒီတစ်​​ခေါက်​က​တော့ 2015 ခုနှစ်​ထွက်​ကား​ကောင်း​လေးတစ်​ကားနဲ့မိတ်​ဆက်​​ပေးချင်​ပါတယ်​။
အီ​ယောင်းလို့​ခေါ်တဲ့ စွန့်​ပစ်​ခံက​လေးတစ်​​ယောက်ကို ​ငွေတိုး​ချေးစားတဲ့မိန်းမတစ်​​ယောက်​က​မွေးစားလိုက်​တယ်​။
​ငွေ​ချေးတယ်​ဆို​ပေမယ့်​ ပြန်​မဆပ်​နိုင်ရင်​ လူသတ်​၊ ကလီစာထုတ်​​ရောင်းတဲ့ အလုပ်​​တွေပါလုပ်​တယ်​။
ဒီလိုနဲ့ ပက်​ဆူဟွန်းဆိုတဲ့ ကြင်​နာတတ်​တဲ့​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့ဆုံ​တွေ့ခဲ့တယ်​။
ဆူဟွန်းအ​ဖေဖြစ်​သူ ထွက်​​ပြေး​တော့ အီ​ယောင်းအ​မေက ဆူဟွန်းကိုသတ်​ဖို့လုပ်​တယ်​….
ဒီလိုနဲ့ အီ​ယောင်းတစ်​​ယောက်​ သူ့ကိုကြင်​နာတဲ့​ကောင်​​လေးကို ကယ်​တင်​နိုင်​မှာလား……
ဒါမှမဟုတ်​ ​မွေးစားအ​မေအတွက်​ ဆူဟွန်းကိုသတ်​မှာလား….
အီ​ယောင်း​နေရာမှာ​တော့ Kim Go Eun ကပီပီပြင်​ပြင်​သရုပ်​​ဆေုင်​ထားပါတယ်​
သနားကြင်​နာတတ်​တဲ့​ကောင်​​လေးက​တော့ uri Bogum oppa ဖြစ်​ပါတယ်​။
Actors: Kim Go-eun, Kim Hye-soo, Ko Kyoung-pyo, Lee Soo-kyung, Park Bo-gum, Um Tae-goo
Soliddrive.co Myanmar1.05 GB Download Mega.nz Myanmar1.05 GB Download
Trailer: Coin Locker Girl ( 2015 )